people Nepal » निर्वाचन आयोगसँग मन्त्रीहरूको सवालजवाफ निर्वाचन आयोगसँग मन्त्रीहरूको सवालजवाफ – people Nepal
काठमाडौं/निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नपाउने आचारसंहिता लागू गरेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । आयोगले बुधबार गरेको छलफलमा मन्त्रीहरूले राजनीतिक दायित्व बन्देज गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन् ।
तपाईंहरू निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी बनाउन चाहनुहुन्छ कि हुँदैन ? जवाफ चाहियो । मन्त्रिपरिषद्मा ४०–४५ जना हुनुहुन्छ, सबै निर्वाचनमा किन जानुप¥यो ? मन्त्रीहरू निर्वाचन क्षेत्रमा निरन्तर जाने हो भने मन्त्रालयले नै निर्वाचन गरे भइहाल्यो नि । प्रचारप्रसारका लागि गाउँमा पार्टी छँदै छन् । मन्त्रीले आफ्ना खास उम्मेदवार र निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्न पाइँदैन । मन्त्री जिल्ला सदरमुकामभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न । जानुभयो भने त्यसको परिणाम उम्मेदवारले भोग्छ । हामीले सिडिओलाई पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ ।
आयोगलाई आज–भोलि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन चाहियो । त्यो पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको चाहियो । धेरै ढिला भयो अब पर्खिँदा समस्या हुन्छ । स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन समितिको म्याद त तीन दिन थपेको सुनियो, तर निर्वाचनको म्याद त थपेर हुँदैन ।